समाचार – Radio Madi
सोमेश्वरगढीमा कार्तिक २३ गते शनिवारदेखी राष्ट्रिय प्रस्तर मूर्ति…
महाराजगंजको बरईपुर बाल विवाहमुक्त वडा घोषणा ।।
सनिउल्ला धोबी, कपिलवस्तु मंसिर १४ कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिका वडा नं ४ बरईपुर ‘वाल विवाह मुक्त वडा’ घोषणा भएको छ । वाल विवाह व्याप्त भएपछि त्यसलाई रोक्न वाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको महाराजगंज नगरपालिकाका प्रमुख अब्दुल कलामले बताउनु…
घोराहीमा धारिलो छुराबाट मारिएका घर्ती को हुन?? हत्याको नालिबेली पढ्नुस!
टेक बहादुर पुन मँसीर १४, दाङ्ग । रोल्पा निबासी नेपाल मगर संघका पुर्ब केन्द्रीय उपाध्यक्ष नन्दबहादुर घर्ती मगर समुदायमा बौद्धिक ब्यक्तिका रुपमा परिचित रुपमा गनिने ब्यक्ति हुन् । लामो समय शिक्षण पेशामा जोडिनुभएका घर्ती मगर समुदायको उत्थानका…
सन्तुलित विकास तथा जनभावना अनुसार कार्य गर्न घरदैलोमै स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलन
१३ मंसिर २०७५ प्युठान । सरुमारानी गाउपालिकाको कार्यालयले स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलनको प्रक्रीया शुरु गर्ने भएको छ । नेपालको संविधानको अनुसुची ८ को क्रमसंख्या ६ मा व्यबस्था गरिएको स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि अन्तर्गत स्थानीय तथ्यांक र…
दाङमा वडाध्यक्षको निधन
दाङ, १३ मंसिर । घोराही उपमहानगरपालिका—१६ का वडाध्यक्ष लक्षिणप्रसाद बुढा मगरको निधन भएको छ । गएको जेठ महिनादेखि बिरामी भएका वडाध्यक्ष बुढा मगरको गएराती ३ बजे निधन भएको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । २०७४ साल असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको…
अबैध सालको काठ बरामद
कामना डेली- घरमा लुकाई छिपाई राखेको १४ क्यूफिट सालको चिरान काठ ईलाका बन कार्यालय हंसपुरले बुधवार बरामद गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा ईलाका बन कार्यालयबाट खटिएको टोलीले सरुमारानी गाउँपालिका—४ बड्डाडा स्थित बलिराम सुनारको घरबाट ३९ थान चिरान…